भारत भन्छ – ‘यो रेल हामीले नेपाललाई उपहार स्वरुप दियौं’ – live 60media
भारत भन्छ – ‘यो रेल हामीले नेपाललाई उपहार स्वरुप दियौं’
काठमाडौं – शुक्रबार रेल भारतबाट नेपाल आइपुगेको छ । जनकपुर डिजेलबाट चल्ने इन्जिनसहितको ४ बोग्गी र एक इन्जिनसहितको दुई सेट रेल शुक्रबार दिउँसो जनकपुर आइपुगेको हो ।
सात वर्षदेखि बन्द रहेको रेल सेवा अब पुनः सुचारु हुने भएको हो । नेपालको झण्डाको रंगको समीश्रण रहेको रेलको शुक्रबार जनकपुरमा भव्य स्वागत गरिएको थियो ।
भारतको चेन्नईमा बनेको रेल करिब एक महिनापछि नेपाल आइपुगेको हो । यस्तै नेपाल सरकारले किनेको भनिएको रेल भारतले उपहारमा दिएको दबी गरेको छ । भारतका रेलवे र ब्यापार तथा उद्योगमन्त्री पियुस गोयालले रेलवेद्वारा नेपाललाई २ वटा रेल दिइएको बताएका छन् ।
उनले सामाजिक सञ्जालमा ट्वीटमार्फत भारतले नेपाललाई उपहारमा रेल दिएको दाबी गरेका हुन् । उनले ट्वीटमा नेपालसँग प्राचिनकालदेखि नै सौहाद्रपूर्ण सम्बन्ध रहेको बताएका छन् । उनले नेपालसँगको पुरानो सम्त्रन्ध लाई नयाँ आयाम दिदै दुई वटा रेल दिइएको बताएका हुन् ।
तर नेपाल रेल्वे बिभागले भारतीय कम्पनीबाट दुई सेट रेल ८६ करोडमा किनेको दाबी गरेको छ । नेपाल सरकारले उक्त रेल भारतीय सरकारी कम्पनी कोनकान कम्पनीमार्फत किनेको बताएको छ । नेपाल आइपुगेको यो रेल धनुषाको कुर्थादेखि भारतको जयनगरसम्म सञ्चालन गरिनेछ ।
← बिक्रम दाइ काम गर्न भारत गएको बेला, श्रीमतीको पेटमा बस्यो क-स्को बच्चा ? गाउँले नै उर्लियपछि, दाङमा (हेर्नुहोस भिडियो)
यौ*न लाइफ रोमा*ञ्चक बनाउनुछ ? त्यसो भए यी १० उपाय अपनाउनुस् ! →